DJI သည် All-new Modular DJI Action2ကို စတင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
DJI သည် Modular DJI Action2အသစ်ကို စတင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
28 / 10 / 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 3
အရပ်ဘက်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များနှင့် တီထွင်ဖန်တီးထားသော ကင်မရာနည်းပညာများတွင် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင် DJI သည် ယနေ့ DJI Action2အသစ်ဖြင့် အက်ရှင်ကင်မရာတစ်ခု လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို ပြန်လည်ပုံဖော်ထားပါသည်။ ပြောင်းလဲနိုင်သောနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော သံလိုက်ဒီဇိုင်းသည် ဗီဒီယိုတိုင်းကို ဆွဲဆောင်မှုရှိစေရန် ထူးခြားဆန်းသစ်သောကိရိယာများဖြင့် ဖန်တီးနိုင်စေရန် မြင်ကွင်းအသစ်ကို ဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်။ နှင့် DJI ၏ မယှဉ်နိုင်သော တည်ငြိမ်မှုစနစ်များတွင် ကျွမ်းကျင်မှုပါရှိသော ကင်မရာကို စောင့်ကြည့်ပါ။ DJI Action2သည် သေးငယ်ပြီး စွယ်စုံရရှိပြီး ယခင်ထွက်ရှိထားသည့်အရာများထက် ပိုမိုအားကောင်းသောကြောင့် လူတိုင်းကို ကြည်လင်ပြတ်သားသော 4K ဖြင့် ဘဝ၏စွန့်စားခန်းများကိုဖမ်းယူရန် ကိရိယာများနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုပေးသည်။
Modular၊ Wearable Design
Intelligent Features များဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသည်။
အလေးချိန် 56 ဂရမ်ရှိပြီး ကျစ်လျစ်ပြီး ဆန်းသစ်သော မော်ဂျူလာ ဒီဇိုင်းသစ်သည် သုံးစွဲသူများအား DJI Action2ကို မည်သည့်နေရာမဆို ယူဆောင်နိုင်စေပါသည်။ FPV စက်ဘီးစီးခြင်းကို ရိုက်ကူးရန် သင့်ဦးထုပ်ဆောင်းရန်၊ လှိုင်းလုံးကြီးများဘေးတွင် တပ်ဆင်ရန်နှင့် မြို့သစ်တွင် သင့်ခရီးစဉ်အတွက် လွယ်ကူပြီး လက်လွတ်အချိန်ကိုက်ဖန်တီးရန် သင့်အင်္ကျီကို လုံလုံခြုံခြုံဝတ်ဆင်ရန် ရွေးချယ်စရာများ ပါရှိသည်။ . vlogging မှ လွန်ကဲသော အားကစားများအထိ၊ Action2သည် ဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်သော၊ ရေစိုခံကာ ကျဆင်းမှုဒဏ်ခံနိုင်သည့် သုံးဆသောခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်ပြီး ဘဝ၏စွန့်စားခန်းအားလုံး၏ အတက်အကျများကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် ကြံ့ခိုင်သည်။ DJI Action2တွင် ကင်မရာယူနစ်နှင့် အမျိုးမျိုးသော မော်ဂျူးများ ပါ၀င်သည် - အရှေ့ဘက် ထိတွေ့မျက်နှာပြင် မော်ဂျူး၊ ပါဝါ module နှင့် အမျိုးမျိုးသော တပ်ဆင်အရံကိရိယာများ ပါ၀င်ပါသည်။
DJI Action2၏ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်များသည် သင့်ဓာတ်ပုံကို ထိန်းချုပ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူ အဆင်ပြေစေရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် အာရုံစိုက်နိုင်စေရန် ပြန်လည်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါသည်။ ကင်မရာယူနစ်တွင် 1.76 လက်မအရွယ် OLED ထိတွေ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုပါရှိကာ အရှေ့ဘက် touchscreen module တွင် နောက်ထပ် OLED မျက်နှာပြင်တစ်ခုပါရှိကာ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် selfie-and vlog ကိုချက်ချင်းသတ်မှတ်နိုင်စေကာမူ ကင်မရာယူနစ်၏အောက်ခြေတွင် သံလိုက်သော့ခတ်မှုများဖြင့် လုံခြုံစွာချိတ်တွဲထားသည်။ Gorilla Glass ဖြင့်ကာကွယ်ထားပြီး၊ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်များသည် ပိုမိုတိကျသောထိန်းချုပ်မှုအတွက် haptic တုံ့ပြန်ချက်များကိုအသုံးပြုသောကြောင့် ကင်မရာဆက်တင်များမှတစ်ဆင့် လျင်မြန်စွာသွားလာနိုင်သည်။
1/1.7 လက်မအရွယ် အာရုံခံကိရိယာသည် မယုံနိုင်လောက်စရာအသေးစိတ်အတွက် 4K/120fps ဗီဒီယိုအထိ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီး အလွန်ကျယ်ဝန်းသော 155° FOV သည် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကို နစ်မြုပ်စွာရိုက်ကူးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အသစ်ထည့်သွင်းထားသော Color Temperature Sensor သည် ကင်မရာသည် ရှုပ်ထွေးသောအလင်းရောင်အခြေအနေများနှင့် ရေအောက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတွင် အရောင်များပြန်လည်ရရှိစေရန် ကူညီပေးပါသည်။
ဘတ် Bosch သည် ၎င်း၏ ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ Fabs များတွင် ယူရိုသန်း 400 ကျော် 2022 ခုနှစ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်ဖြစ်သည်။
၎င်း၏ရှေ့ဆက်သူနောက်တွင်၊ DJI Action2သည် DJI ၏ မူပိုင်အီလက်ထရွန်နစ်ရုပ်ပုံတည်ငြိမ်ခြင်း (EIS) နည်းပညာကို RockSteady 2.0 တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချောမွေ့မှုအဆင့်အသစ်အတွက် HorizonSteady သည် သင်၏ပိုမိုသွက်လက်သောအခိုက်အတန့်များအတွင်း၌ပင် ရိုက်ကူးမှုတစ်လျှောက် အဆင့်ဘောင်ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ DJI Action2ကင်မရာယူနစ်တွင် သူ့ဘာသာသူ မိနစ် 70 အထိ အသုံးပြုနိုင်သည့် ဘက်ထရီပါရှိပြီး Front Touchscreen Module နှင့် ချိတ်ဆက်သည့်အခါ မိနစ် 160 နှင့် ပါဝါ module ဖြင့် မိနစ် 180 ရှိသည်။ DJI Action2ကို အသုံးပြု၍ အရှေ့ဘက် touchscreen Module နှင့်အတူ DJI Matrix Stereo နည်းပညာကို DJI Pocket2တွင် ပထမဆုံးတွေ့မြင်ရသော DJI Matrix Stereo နည်းပညာကိုလည်း ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ကင်မရာယူနစ်မှ မိုက်ခရိုဖုန်းမှ မိုက်ခရိုဖုန်းသုံးလုံးကို မော်ဂျူးမှ မိုက်ခရိုဖုန်းသုံးလုံးနှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး နေရာတိုင်းမှ အသံများကို ဖမ်းယူနိုင်ပြီး ပြန်ဖွင့်စဉ်အတွင်း နစ်မြုပ်သောအသံကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ .
DJI Action2သည် အောက်ပါတို့အပါအဝင် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော အင်္ဂါရပ်များစွာကို ပေးဆောင်သည်-
အနှေး အနှေးပြကွက်ဖြင့် ဗီဒီယိုကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (4K/4fps တွင် 120x နှင့် 8x 1080p/240fps) ဖြင့် ရွေ့လျားနေသော အခိုက်အတန့်များကို အမြဲတမ်းဖမ်းယူပါ။
Hyperlapse နှင့် Timelapse- သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာရွေ့လျားနေသော ကမ္ဘာကြီး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ ထူးခြားသောအကြောင်းအရာများကိုဖမ်းယူရန် Timelapse နှင့် Hyperlapse ဖြင့် အချိန်၏ခံယူချက်အား ထိန်းချုပ်ပါ။ Hyperlapse ရိုက်ကူးနေစဉ်အတွင်း၊ သင်သည် ပိုမိုဖန်တီးမှုရွေးချယ်စရာများအတွက် ပုံမှန်အမြန်နှုန်းဖြင့် အသံသွင်းခြင်းသို့ ပြောင်းနိုင်သည်။
QuickClip− ဆိုရှယ်မီဒီယာအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော စက္ကန့် 10၊ 15 သို့မဟုတ် 30 ဗီဒီယိုတိုများ ရိုက်ရန် ကိရိယာကို သတ်မှတ်ပါ။
တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း: 2p/1080fps အထိ တည်ငြိမ်သော stream output ဖြင့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကို ထုတ်လွှင့်ရန် DJI Action 30 ကို အသုံးပြုပါ။
UVC- DJI Action2ကို သင့်ကွန်ပျူတာအတွက် USB ဗီဒီယိုကိရိယာအတန်းအစား (UVC) အဖြစ် အသုံးပြုပြီး အစည်းအဝေးခေါ်ဆိုမှုများနှင့် တိုက်ရိုက်ဂိမ်းထုတ်လွှင့်မှုများအတွက် အရည်အသွေးမြင့် ဗီဒီယိုကို ရိုက်ကူးပါ။
DJI Action2ကို store.dji.com နှင့် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ခွင့်ပြုထားသော လက်လီလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံမှ ယနေ့ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ DJI Action2Dual-Screen Combo သည် $519 USD ဖြင့် ရောင်းချထားပြီး DJI Action2Camera Unit၊ Front Touchscreen Module၊ Magnetic Lanyard၊ Magnetic Ball-Joint Adapter Mount နှင့် Magnetic Adapter Mount တို့ ပါဝင်ပါသည်။ DJI Action2Power Combo တွင် $399 USD ဖြင့် ရောင်းချထားပြီး DJI Action2Camera Unit၊ Power Module၊ Magnetic Lanyard နှင့် Magnetic Adapter Mount တို့ ပါဝင်ပါသည်။
điDJI အက်ရှင် ၂
လွန်ခဲ့သော Qualcomm သည် Snapdragon 7၊6နှင့်4စီးရီးများတစ်လျှောက် စွမ်းဆောင်ရည်များ တိုးမြှင့်ပေးအပ်ရန် မိုဘိုင်းလမ်းပြမြေပုံကို အဆင့်မြှင့်တင်
နောက်တစ်ခု AI နှင့် Big Data သည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းကို မည်သို့ပြောင်းလဲစေသနည်း။